Xirmo Burush Jebinta oo Tayo Sare Leh | Abuurista khadka tooska ah
La qoraalka Waa mid ka mid ah howlaha ugu xiisaha badan ee aan fulin karno. Waa mid ka mid ah saameyntaas oo lagu muujiyey tayada iyo kartida hal-abuurnimo ee naqshadeeye muuqaal iyo sawir-qaade sawir-qaade ah. Nasiib wanaag, waxaan haynaa qalab ka dhigaya shaqadeena mid aad u fudud. Burushka shaqada noocan ahi aad ayey muhiim u yihiin waxayna noqon karaan cunsur sameeya farqiga u dhexeeya shaqada la qabtay. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago xirmo aad u dhameystiran oo tayo sare leh burush dildilaac ah, oo ku habboon in lagu dabaqo cufnaanta ama iskudhafka iskudhafka iyo walxaha adag, sida darbiyada ama geedaha. Waxay sidoo kale noqon karaan kuwo aad u xiiso badan in lagu abuuro saameyn gaar ah wajiyada astaamaheena adoo adeegsanaya maaskaro lakab ah. Fursadaha ayaa aad u ballaaran, waxaad leedahay fursado badan oo hal abuur leh. Waxay kuxirantahay waxaad rabto inaad gaarto!
Waqtigaan halkaan idinkaga tagayo xirmadaan soosocota oo habka kujira gebi ahaanba waa bilaash oo leh wadar ahaan sagaal qaabab macquul ah oo macquul ah oo ka mid ah dildilaacyadan iyo jabitaanadan. Waad heli kartaa Xiriirka soo socda qaab isku duuban. Haddii ay dhibaato jirto markii la helayo waxyaabaha ku jira, waa inaad nooga tagtaa faallooyinka hoose. Waa kuwan shaybaarka mid kasta oo buraashka ah ee ku jira xirmada. Iyadoo aan waxbadan la dhihin, Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysan doonto iyaga oo aad ka heli doonto waxqabad sare!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Burush » Burush burush tayo sare leh oo lacag la'aan ah
Ma soo dajisan karaa ????
Haa, xiriiriyehu wuxuu kuu kaxayn doonaa Deviantart halkaasna waxaad ka heli doontaa badhanka soo dejinta oo ku yaal dhinaca midig ee bogga. Dhamaan wanaag!
Hada haa, Mahadsanid !!!